माओवादी केन्द्रका यी तीन नेतालाई पार्टी बाट निकालीयो,आखिर किन ? – Online National Network
माओवादी केन्द्रका यी तीन नेतालाई पार्टी बाट निकालीयो,आखिर किन ?
११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०१:२४
माओवादी बैठकले तीन नेता ‘पार्टीमा नरहेको’ सार्वजनिक घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुमाथि कुनै आग्रह नराख्ने तर पार्टी एकता प्रक्रियामा सहभागी नभएकाले पार्टीमा नरहेको विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए ।
माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेलगत्तै तीन नेताले एकताको विरोध गर्दै माओवादी केन्द्र पुनगर्ठनको घोषणा गरेका थिए । साथै पछिल्लो समय तीनै नेताहरु बैद्य माओवादी र विप्लव समूहले गरेको संयुक्त कार्यक्रममा समेत उपस्थित भएका थिए ।
प्रचण्डको विश्लेषणः वाम एकतामा दायाँ-वायाँ खतरा
यसक्रममा प्रचण्डले पार्टी एकताका क्रममा एमालेको जबजमा माओवादी गएको हैन भन्ने सन्देश कार्यकर्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । माओवादीले एमालेको जबज मान्यो भनेर उग्र वामपन्थी कोणबाट गलत प्रचार भएको भन्दै प्रचण्डले यस्तो भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बैठकमा बताए ।
काठमाडौंमा अगुवा कार्यकर्ता भेला
यसैवीच विहीबारको माओवादी बैठकले पार्टी एकताबारे देखिएका अस्पष्टता एवं भ्रमहरु चिर्नका लागि काठमाडौंमा अगुवा कार्यकर्ता भेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सो अगुवा कार्यकर्ता भेलामा सातै प्रदेशका अगुवा नेता कार्यकर्ता सहभागी गराइने बताइएको छ ।